Mutsvaki wemota dzekurenda - mota yako paBEST PRICE?
Unoda mota yekuhaya here? Ipapo iwe wasvika peji rawanga uchitsvaga. Shandisa yedu mutsvaga wemotokari uye uwane imwe pamutengo wakanakisisa uye nevimbiso dzose dzinobvira.
Injini yekutsvaga mota yekutsvaga
Pamusoro pemitsara iyi iwe uchawana yedu ine simba yekutsvaga injini iyo ichakubatsira iwe kuwana mutengo wakanakisa wasimbiswa. Kuishandisa iri nyore kwazvo, ingo pinda nzvimbo yekutora, maka mazuva ekutora uye mazuva ekudzoka uye iwe unongofanirwa kutsvaga uye uchave neyakanakisa mota yekuba yemotokari paruoko rwako.
1 Injini yekutsvaga mota yekutsvaga
2 Rent mota
3 Zvakanakira kuhaya mota
4 Gara mota pamhepo
5 Mashandiro anoita injini yekutsvaga mota pamhepo
6 Ndinogona kuroja mota ndisina kiredhiti kadhi?
7 Imba inobhadhara sei pakati pevanhu inoshanda?
Chimwe chezvinonyanya kunetsa zvinomuka pakuronga nzendo dzedu, kunyanya kana dziri pamwero mukuru, ndezvekuti tingaite sei kana isu tiine hutsinye. inoda kuita nzira dzeimwe kuomarara kana kufamba kune mamwe maguta.
Vazhinji vanotiza kushandiswa kwekufambisa kwevanhu, kungave nekuda kwekushayikwa kwenyaradzo uye nerusununguko maererano nemahedhiyo, nezvimwe. izvi zvinoreva, kana nekuda kwekuwedzera kwavanogadzira mumutengo wese kana bhajeti. Nekudaro, kufamba nemota yedu pachedu hakuite nguva dzose, ndipo panobva pfungwa yeiyo dzimba dzekurenda.
Zvinogona kunge pakutanga, kurendesa mota iri basa rakaomarara, asi hapana chimwe chiri kure nechokwadi. Tevere, isu tinotsanangura uye tinokubatsira kuti uzviite sei. Uye kana iwe uchida kuwana iwo wakachipa pamutengo unofanira chete tinya pano.
Zvakanakira kuhaya mota
Kufunga kukumbira mota yekurenda parwendo rwako kunogona kuve nezvakanaka zvikuru
Libertad yezvirongwa zvekufamba nekufamba.
Ronga nzira zvichienderana nezvido zvako.
Savings, sezvo uchihaya mota, kana isiri mota yepamusoro, inogona kuve nemutengo uri pakati pe5 kusvika € 15 pazuva. Nekudaro, kana isu tikasarudza zvifambiso zveruzhinji, huwandu uhu hunenge hwanyanya kwazvo.
Kugona kutakura a huwandu hwakawanda hwemikwende.
Gara mota pamhepo
Parizvino, munetiweki tinowana akasiyana makambani akatsaurirwa kubhadharisa mota dzinotipa mukana wekukumbira masevhisi avo zvachose online. Asi chinhu hachigumira pano, asi isu tine imwe sarudzo senge akasiyana mapeji ewebhu anotipa isu enjini dzekutsvaga dzinoteedzera pakati peakasiyana mafranchise akapihwa kune ino chikamu kuitira kutiratidza best prices.
Pakati pevakakurumbira, isu tine:
RentalCars ipuratifomu iyo inobvumidza iwe kuti uenzanise vese vanopa rubatsiro rwekuhaya mota kuti uwane yakachipa pamutengo. Kuishandisa iri nyore kwazvo unofanira kubaya pano, zadzisa iyo data rese uye iwe unogona ikozvino kuchengetedza mota yako yekurenda nemutengo wakanakisa.
Budget yakavambwa muCalifornia, kunyanya muguta reLos Angeles, muna 1958. Yakatanga sebhizinesi remhuri diki nemotokari gumi chete dzekurenda.
Nhasi, ine huwandu hwakawanda hwemotokari, marori nemavans, kuwedzera kune akazara e 3.400 mahofisi ari munyika 128.
A kambani nyanzvi kukwereta mota muEurope nemakore anopfuura 60 ane ruzivo uye anovimbwa nevatengi vanopfuura mamiriyoni matanhatu muna 2014. Unogona kuwana zvavanopa nekupinda iyi link.
Six.es ibasa repamhepo rinopa kubhadharisa mota muSpain yese uye mune dzinopfuura nyika dze105 pasirese. Saka zvino unogona bhuku ne10% dhisikaundi kuvonga kuna AbsolutViajes clicking here. Ucharasikirwa nemukana here?
Mazuva ano, uko maApp ave chinhu chakakosha kuita kuti hupenyu hwedu "huve nyore", KAYAK inomuka, ine chinangwa chekutipa ruoko pakuronga rwendo rwedu rwakanaka. tichienzanisa mitengo yakanakisa pakati pemapeji akasiyana ewebhu. Uye, hongu, inotipawo mukana wekutsvaga iyo yekurenda mota inonyatsoenderana nezvatinoda.
Munhu wega wega ane zvaanoda, ndosaka Avis inotipa ngarava hombe dzemotokari zvemarudzi ese: kubva kumotokari dziri nyore kusvika kune dzine simba uye dzeumbozha. Iyo zvakare inogara ichitipa dzakasiyana siyana discounts nguva dzose. Sarudzo yekugara uchifunga, iyo zvakare Iye zvino wave nechipo chemazuva matatu pamutengo we3 nekudzvanya apa.
Mashandiro anoita injini yekutsvaga mota pamhepo
Tingave tichitarisa injini yekutsvaga inofananidza mitengo pakati pemakambani akasiyana-siyana ekubhadhara motokari kana kana iri injini yekutsvaga yeimwe kambani, kushanda kunogara kwakafanana.
Mavari ndimo matiri inoratidza skrini ine mabhokisi akasiyana uye sarudzo dzatinofanira kuzadza. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuratidza nzvimbo yatiri kufarira kutora mota. Gare gare, isu tinoratidzira iwo mazuva ekuunganidza uye kuendesa zvakafanana. Chekupedzisira, isu tinofanirwa kutsanangura mhando uye hunhu hwemota.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, zvinoenderana neinjini yekutsvaga yakashandiswa, isu tinomanikidzwa kupa mamwe marudzi eruzivo. Nekudaro, izvi zvinodiwa zvataurwa pamusoro ndezviya zvinoonekwa seyakajairwa mutemo mumafomu ekutsvaga, uye masimba anowanzo kutsanangurwa.
Ndinogona kuroja mota ndisina kiredhiti kadhi?
Mazhinji makambani anozeza kubvumidza kukodha kwemotokari kuburikidza ne kubhadhara mari, asi inoda a kadhi rechikwereti nezvazvo. Naizvozvo, inogona kuve isingabvumirwe mishoni yekutora mota yekurendesa isina iyi mhando yekushanda.
Icho chikonzero chekuramba mari muruoko chiri nyore kwazvo. Motokari dzinodhura, dzakaoma kuchengeta uye, kunyanya, dzinogadziriswa izvo mune dzimwe nguva dzinogona kudhura zvakanyanya. Ndosaka makambani achifanirwa kuona kuti mota hadzisi kuzokuvara nekuda kwevatengi, uye kana izvi zvikasakwanisika, vanofanirwa kuyedza kudzikamisa kwete kuunza kurasikirwa kwehupfumi. Nenzira iyi, ivo vanogadzira inshuwarisi yakasungirirwa pakubhadhara mota.
Aya maInishuwarenzi anochengetwa mudhipatimendi iri semari inozongopihwa nemutengi kana paine chinodikanwa (kuputsika kwemishini, kuputsa, kurova, nezvimwewo). Nemakadhi echikwereti zviri nyore kugadzira iyi dhipoziti, "ichivharira" imwe huwandu hwenzvimbo iriko inozo "sunungurwa" pakuburitsa mota.
Kunyangwe, sekuchinja kwezvinhu zvese muhupenyu huno, mamiriro ezvinhu aya aisazove mashoma. Atova mune akati wandei emaguta makuru pane makambani ari kuda kurendesa mota dzavo kwatiri kuburikidza nekubhadhara mari. Via online yakanyanya kuomarara, asi pane atove mamwe makesi senge AutoEurope.
Imba inobhadhara sei pakati pevanhu inoshanda?
Munguva pfupi yadarika, kubhadharisa mota kwave nekuchinja. Kuwedzera uye nekuwedzera ndiwo makambani asingape yavo mota, asi anoshanda kuburikidza nevanhu. Ndokunge, ndivo vanhu vanofarira kuita bhizinesi kana kuita imwe purofiti ndiani vanopa yavo mota kuita kuti zviwanikwe kune vashandisi.
Varidzi vanosarudza mutengo uye kuwanikwa, uye pavanogamuchira chikumbiro chekurenda, vanosarudza iyo yavanofunga seyakareruka zvinoenderana nezvavanoda. Gare gare vanoisimbisa uye vanotumira kero uye mirairo yekutora mota kune roja.
Mota inogara ichidzoserwa ne tangi izere nemafuta (sezvazvaive panguva yekusununguka), uye pamwe chete, muridzi nemusikana, tarisai mamiriro emota kuti muone kuti hapana kukuvara nekukuvara kunowanikwa.
Chirongwa chiri kubatanidzwa nevanhu vazhinji uye vazhinji vanotsvaga kuwana imwe mari.
Kufunga zvekurendesa mota kana chero mhando yemotokari mukati merwendo rwedu kune sarudzo dzakakomba kuve sarudzo yatisingazodemba.
Pakutanga, uye kana tangofunga kuzviita, tingave nezviuru zvemibvunzo uye kumwe kusahadzika mupfungwa dzedu. Nekudaro, tatoverenga zvese zviri pamusoro, tinovimba kuti mibvunzo yese iyi yakapindurwa uye kusahadzika kwakabviswa.